၁၃၃၆ခု၊ ပြာသိုလ်လဆန်း (၄)ရက်၊ (၁၅-၁-၁၉၇၅) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တွင်၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ဒိုက်ဦးမြို့၊ အုပ်ဝင်းကျေးရွာ၊ ခမည်းတော် ဦးတင်မောင်၊ မယ်တော် ဒေါ်ခင်ထွေးတို့မှ မွေးဖွားသည့် တတိယမြောက် သားရတနာ ဖြစ်သည်။
This entry was posted on September 10, 2012 by Noble Kyaw. It was filed under ဆရာတော်ကြီးများ၏ထေရုပတ္တိ and was tagged withိdhamma, ထေရုပတ္တိ, buddhism, buddhist, buddhist monk, theravada.
အရှင်ရာဇိန္ဒ (ရဝေနွယ် အင်းမ) Ya Wai Nwe (Inn​Ma)